Endrika reraka : Ireo « gommage » natoraly mety aminao!
Ilaina ny mampiasa akora natoraly ikoloana ny endrika, na dia efa mampiasa akora vidiana eny an-tsena aza. Tafiditra ao anatin’izany ny akora fanaovana « gommage » sy maska. Isan’ireo mandaitra sy tsara indrindra, nofantenan’ny matihanina ho anao mpamaky izy ireto.
Tsara ho fantatra mialoha
Ny maska, dia atao mba hamelombelomana sy hanalefahana ny hoditra. Ny « gommage » indray dia manadio ny hoditra, any anatiny ka hatreny ivelany, ary manala ny loto manentsina mason-koditra. Mila fitandremana, araka izany ny « gommage » satria mety hamparefo ny hoditra. Etsy ankilany, ny olona manao « fond de teint » matetika, na tia mampiasa akora eo amin’ny tarehy, dia tsaratsara kokoa raha in-2 isa-kerinandro no manao « gommage » arahina maska. Raha marefo na makina ny hoditra, dia in-dray mandeha isaky ny tapa-bolana na in-3 isam-bolana ihany, raha betsaka no azo hanaovana azy. Ho an’ny « gommage » anefa dia tsaratsara kokoa raha amin’ny hariva na amin’ny alina no hanaovana azy. Avela miaina malalaka sy azon’ny hazavana izy ny ampitso, izay vao hosorana maska.
Ho an’ny tarehy mifangaro na « peau mixte »
Mety tsara ho an’ireo hoditra mora maina, nefa mora be menaka izy ity.
- Siramamy fotsy madinika tsara, 1 sotro lehibe
- Yaourt tsy mamy 2 sotro lehibe
Ho an’ny tarehy be menaka, be mony
- Antsasaka voasarimakirana
- Menaka oliva kely
- Siramamy 1 sotro fihinanana
Ho an’ny tarehy makina
- Tantely 1 sotro lehibe
- Yaourt 1 sotro lehibe
- Vovoka amande 2 sotro lehibe
Fampiasana ny « gommage »
Afangaro tsara ireo akora ireo, ahosotra amin’ny tarehy ary somary kosehina moramora mandritra ka atao manoritra boribory. Kobanina amin’ny rano matimaty rehefa afa-po.